HALKAAN KA KHRISO WARARKA WARGEYSKA M. TIMES EE MAANTA OO AXAD 28-KA NOV. 2021-KA AH
Sunday November 28, 2021 - 08:39:20 in Wararka by Mogadishu Times
Madaxtooyada Soomaaliya oo loo Magac aabay Agaasime cusub
Madaxweynaha muddo xileedkiiso dhamaaday Md. Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa Xeer Ma daxweyne ugu magacaabay Prof. Maxamed Cabd ullaahi Ciise (Dheere) inuu noqdo Agaasimaha Gu ud ee Madaxtooyada Qaranka.
Prof. Maxamed Dheere ay aa xilligan muhiimka ah ku soo biirinaya maamulka Xafi iska Madaxweynaha khibrad shaqo oo kor u dhaafaysa 28 sanadood, wuxuuna si gaar ah uga soo shaqeeyay arrimaha siyaasadda, maamulka iyo horumarinta bulshada.
Madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa faray Agaasimaha cusub inuu si hufan u guto hawlaha muhiimka ah ee haatan horyaalla, wuxuu na Alle uga baryay inuu u fududeeyo masuuliyad dan culus ee loo igmaday.
Madaxweyne Farmaajo ayaa uga mahad celiyay Agaasimihii hore oo haatan loo magacaabay Wasiirka Arrimaha Dibadda iyo Iskaashiga Caalami ga Mudane Cabdisaciid Muuse Cali sidii xilkasnim ada ahayd ee uu usoo hoggaamiyay Xafiiskan mud dadii koobnayd ee uu xilka hayay.
Ra’iisul Wasaaraha XFS oo guddoomiyay shirka Guddiga Gurmadka abaaraha ayaa ku dhawaaqay in Xukuumaddu 1 Milyan oo Doollar oo hordhac ah u qoondeysay gurmadka abaaraha.
Ra’iisul Wasaare Rooble ayaa faray Guddiga Gurmadka Abaara ha in sida ugu dhaqsiyaha badan caawimaad ula gaaraan deegaa nnada ugu daran ee abaartu saameynta ku ye elatay.
Waxaa uu sheegay in xukuumadda Soomaaliya ay ka go’an tahay sii wadida dadka ay saameeyeen Abaaraha in la caawiyo.
Rooble ayaa sidoo kale ka dalbaday Ganacsa tada iyo qurbaha joogta Soomaaliyeed in ay si mug leh uga qeyb qaataan caawinta dadka dhibaateys an.
Guddoomiyaha Golaha Shacabka Baarlamaan ka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Md. Maxamed Mursal Sheekh C/raxmaan ayaa loo doo rtay inuu mar kale noqdo Xildhibaan ka tirsan Gol aha Shacabka.
Guddoomiyaha ayaa u tartamay ay kursiga sumadiisu tahay HOP 182, isagoo helay codad gaaraya 88 Cod, ka dib doorasho Shalay ka dhacday Magaalada Baydhabo.
Gudoomiyaha Mursal ayaa horay loogu eedeeyay in kursigiisa aysan ku tartameyn Musharaxiintii u baahneyned, islamarkaana uu soo xushay qofka la tartamaya.
Doorashada golaha Shacabka ee hadda socoto ayaa ah mid lasii ogyahay natiijada doorashada.
Jawaari oo la kulmay Guddiga Doorasho oyin ka, lana joojiyay doorashada kurs igiisa
Guddiga Hirgelinta Doorashooyinka Heer Feder aal ayaa shaaca ka qaaday inay hakiyeen, oo ay joojiyeen doorashada kursiga uu tirsigiisu yahay #HOP103, kaas oo uu u sharaxnaa Prof. Maxamed Sheekh Cismaan Jawaari, Gudoomiyihii hore ee Golaha Shacabka.
Prof. Maxamed Sheekh Cismaan Jawaari ayaa Shalay Magaalada Muqdisho kula kulmay Guddiga Hirgelinta Doorashooyinka Heer Federaal, isagoona u gudbiyay cabashadi isa ku aaddan in Arbacadii laga hor istaagay shahaadada musharaxnimada xu bin imadiisa Golaha Shacabka. Guddiga Doorashooyin ka ayaa Maamulka Gudd iga Doorahada Koonfur Galbeed faray inay joojiya an doorashada kursiga asi, illaa amar dambe.
"Waxaan faraynaa Guddoonka iyo Guddiga Doora shada Koonfur Galbeed in la joojiyo qabashada doorashada kursiga tirsigiisu yahay 103, illaa amar dambe.” Ayaa lagu sheegay warsaxaafadeed ka soo baxay Guddiga Doorashooyinka Heer Federaal.
Guddoomiyaha Guddiga Doorashada Koofur Galbeed ee SEIT Yuusuf C/qaadir Baafo ayaa shee gay in guddiga FEIT aanu xaq u laheyn inuu joojiyo doorashada kursiga HOP103.
Waxaa uu sheegay in Guddoo miyaha FEIT wax sharciyad u he ysan ee uu kursigaas ku joojiyo, waxaana uu caddeeyay in kurs igaas doorashadiisa maainta berri ay qaban doonaan.
Waxaa uu sheegay in aysan qaadan doonin aw aamiirka Guddiga doorashooyinka heer Federaal, islamarkaana ay leeyihiin doorashada, taasoo mee sha ka saaraysa guddiga doorashooyinka heer Federaal.
Guddiga doorashooyinka heer Federaal ayaa hakiyay doorashada kursigii dhawaan loo diiday in uu tartamo Gudoomiyihii hore ee golaha Shacabka Maxamed Sheekh Cusmaan Jawaari.
War kasoo baxay Guddiga ayaa lagu sheegay in cabasho xoogan ay ka timid qabashada kursigaasi, islamarkaana la hakiyay ilaa inta laga helaayo xal buuxa.
Rooble oo Madaxda maamul goboleedyada uga digay boobka doorashada
Ra’iisul Wasaaraha XFS Mudane Maxamed Xu seen Rooble oo kulan la yeeshay Guddiga Xallinta Khila afaadka iyo Guddoonka Guddiga Hirgelinta Doorashooyinka Heer Federaal.
Kulanka ayaa hadlay xal u helis ta cabashooyin ka la xiriira doora shada Golaha Shacabka, isagoo ku boorriyay madaxda dowlad-gob oleedyada iyo guddiyada doora shooyinku in ay dhowraan hufna anta doorashada.
Ra’iisulwasaare Rooble ayaa sheegay in aan marnaba la aqbali doonin in guddiyada doorashoo yinka heer dowlad goboleed ay siyaasadda ku mil maan, islamarkaana ay u shaqeeyaan Madaxda maamul goboleedyada.
Waxaa uu xusay in cidba lagula xisaabtami doono Masuuliyad loo xil saaray ee ku aadan hirgalinta doorashooyinka.
Midowga Musharaxiinta ayaa gabi ahaanba qaa dacay doorashada xildhibaanada Golaha Shacabka oo ay sheegeen in ay ku bilaabatay hab boob ah.
Guddoomiyaha G/Banaadir ahna duqa M/Muq disho Cumar Maxamud Maxamed (Cumar Filish) ay aa Shalay kormeeray qaar kamid ah goobihii uu sida gaarka ah u saameeyay Roobabka deerta ah ee saacadihii lasoo dhaafay ka da’ay Muqdisho.
Guddoomiye Cumar Filish ayaa ku amray howl wad eenada Dowlada hoose ee Xamar iyo maamulada degmooyinka Gobolka Banaadir in la xoojiyo gurmadka dadka danta yar oo ay sameeyeen Roobabkii ka da’ay Caasimadda.
Duqa Muqdisho ayaa sidoo kale Guddoomiyey aasha degmooyinka faray in la dardargaliyo ho wlaha biyaha looga saarayo waddooyinka Magaa lada Caasimadda ee Muqdisho si ay u fududaato is ku socodka gaadiidka iyo bulshada.
Guddoomiye Cumar Filish goobaha uu booqday waxaa kamid ah degmooyinka Shangaani Xamar Weyne, Wadada horumarta school Boloosiya, War ta KM-4 iyo Wadada Ceel Qaloow goobahaas oo kamid ah meelaha uu saameeyay Roobkii ka da’ay Caasimadda.
Saacadihii lasoo dhaafay ayaa waxaa Magaa lada Muqdisho ka da’ayey roobab xoogan oo biyo farabadan dhigay waddooyinka qaarkood, waxaana marista wadada ay ku adkaatay gaadiidka noocy adiisa kala duwan, iyadoona roobabka lagu qabow saday…
Saraakiisha PSF oo shir jaraaid ku qabtay magaa lada Bosaso, waxay sheegeen ujeeddada ka damb eysa in madaxtooyada Puntland faraha lasoo gasho arrimahooda ay tahay, kadib markii agaasimihii ho re ee PSF, Gen, Asad Cismaan Diyaano oo ku biir ay arrimaha siyaasada.
Saraakiishu waxay tilmaam een in ay furimaha dagaal ka uga soo baxeen kadib markii ciiddamo badan oo lagu soo daad gureeyay magaalada Boosaaso ay jidgooyooyin dhigteen waddooyinkii ciiddankoodu ay mari jireen, taasoo ay sheegeen in ay u muuqato cunaqabatayn lagusoo rogay.
Dowladda Maraykanka oo taageeri jirtay ciid dankan, ayaa muddo ka badan hal sano hakisay ta ageeradii ay siin jirtay, marka laga reebo mushaar ka. Maraykanku wuxuu sidoo kale la baxay ciiddan kii ay wada shaqayn jireen ciidamada PSF.
Madaxweynaha Puntland oo agaasime cusub u magacaabay hay’adda PSF, ayaa wasiirkiisa amniga iyo taliyaha ciiddanka Daraawiishta ku amr ay in ay xilka ukala wareejiyaan labada agaasime.
Balse, labada masuul ayaa sheegay in loo diiday in ay la kulmaan madaxda ciiddanka, waxayna shee geen in ay magaalada Bosaso ka socoto abaabul cii ddan oo loogasoo horjeedo isbedelka cusub ee uu madaxweyne Deni ku sameeyay taliska PSF.
Isimada Puntland oo baaq nabadeed kasoo saar ay colaadda Boosaaso iyo dhinacyada isku hay a talada PSF
Isimada dhaqanka ee Puntland ayaa kulan ay Shalay ku yeesheen magaalada Bosaso waxay ku baaqeen in wada hadal lagu dhameeyo khilaafka ka dhashay xil ka qaadista lagu sameeyay agasimaha taliska ciiddanka PSF
Isimada oo shir jaraaid qabtay, ayaa si adag uga horyimid colaadda ka jirta maga alada Boosaso, waxayna nasiib darro ku tilmaame en in xaafaddo kamid ah Boosaaso ay noqdeen furimo dagaal.
Boqor Burhaan Boqor Muuse oo shir guddoom inayay kulanka Isimada, ayaa ku baaqay in xasiloo nida lagu dadaallo, lagana hortago colaad iyo barakac.
Boqor Burhaan waxa uu labada dhinac ugu baa qay in ay joijiyaan hadalada xanafta leh ee ay sax aafadda isku marinayaan, isagoo sheegay in aan cidina dan ugu jirin colaad iyo barakac.
"Waa inaan dadka la qaxin oo nabada iyo xasi loonida lagu dadaallo. Ciiddanku waxay dareeska u sitaan ma ahan in ay dadka dhibaato ku noqdaan, maamulkana waxaa loo dhistay inuu amniga iyo kala dambayn dowladnimo ee loo baahan yahay wa do," ayuu yiri Boqor Burhaan. Si kasta ha ahaatee, Isimada Puntland ayaa la filayaa in ay la kulmaan 2da dhinac islamarkaa na ay kala hadlaan in si na bad ah lagu dhameeyo is
mari-waaga ka dhashay xil qaadista taliska PSF.
Suldaan Mahdi "Haloo gurmado qofka Soomaal iga ee biyo la’aanta u dhimanaya”
Suldaan Mahdi Suldaan Cabdirisaaq ayaa wala ac ka muujiyay xaaladda bani’aadanimo ee dalka ka jirta, kana dhalatay abaaraha sii baahaya ee ka ji ra qaybo ka mida dalka.
Suldaan Mahdi Suldaan Cabdirisaaq ayaa marka hore sheegay in xaaladan oo ka le marka ay dhacdo in dadku sa mayn jireen Alle barri iyo roob doon.
"Waxaan rabaa inaan baaqaan u soo gudbiyo dadka waxgaradka, xilkaska, ahlu iim aanka ee ahlu diinka ee Soomaalida ah. Sidaan oo kale markii masiibada abaarta ay timaado, horta wa xa ugu horeeyo ee la samayn jiray waa in Alle la ba ryo oo la roob doono, inta ardayda la bixiyo Ilaahay gacmaha loo hoorsado, oo la yiraahdo Rabiyow ro ob iyo barwaaqo na sii. Marka Culima’udiinka Soom aaliyeed, Imaamyada Masaajidda iyo Macalimiinta Dugsiyada inay horta ducadii iyo Alle barigii bilaaba an, Ilaahay inuu abaarta, colaadda iyo dhibaatada Somaliya ku raagtay uu naga dulqaado.” Ayuu yiri Suldaan Mahdi Suldaan Cabdirisaaq oo Universaltv la hadlay.
Suldaan Mahdi ayaa dadka Soomaaliyeed, dal iyo dibadba ugu baaqay inay u istaagaan, sidii gur mad ay ku gaarsiin lahaayeen dadka ay abaaruhu saameeyeen.
"Dadka muxsiniinta ee Soomaalida ah, sida gan acsatada, jaaliyadaha dibadda iyo kuwa gudaha joo gga, waxaan la socodsiinayaa in abaarta dalka ka jirta ay ka sii dareyso. Qofka Soomaaliga ah ee Sha lay u dhibaateysan biyo yar oo xoolihiisii iyo naftiisii ku noolleeyo u dhimanayo, haddaan u dadaalno oo wax isugu dardarno waa la badbaadin karaa shac abkaasi dhibaateysan.” Ayuu yiri Suldaan Mahdi.
Waxa kaloo uu yiri "Shirkadaha waaweyn, ganac satada, qurbajoogta, Dowlad Goboleedyada, Dowl adda Federaalka iyo Wasaaradaha ku shaqada leh, haddi ay arrintaasi u kacaan waxaan is leenahay shacabkaasi Soomaaliyeed ee abaartu ku dhacday gurmad way heli karaan, Ilaahayna ha badbaadiyo, naxariistiisaa na deeqdee.”
Suldaan Mahdi ayaa abaarta ku tilmaamay mid uu Alle addoomadiisa ku imtixaamayo, waxaana loo baahan yahay sida uu yiri inaan dhexdayna isu nax ariisano.
"Baaqaygu waxa uu ku socdaa dhammaan inta Soomaalida ah ee wax haysata, iimaankana uu ku dambeeyo in Shalay Soomaalinimo iyo Ilaahay dart iis la isugu gurmado, waxna la isugu qabto. Shalay dadkayaga dhibaateysan ee biyo iyo baad haysan oo xoolihii iyo duurjoogtiiba ay la’anayaan oo maalin kastana aan sawirradoodii arkayno ayagoo daads an, inaan ummadda xusuusiyo in arrintaas ayada ah uu Ilaahay nagu fiirinayo amaba imtixaamayo, si aan dhexdayna isugu naxariisano. Marka la isku gu rmado, dadkana ha loo gurmado, Ilaahayna gargaar kiisa degdeg ah ha siiyo.” Ayuu yiri Suldaan Mahdi Suldaan Cabdirisaaq.
Somaliya ayaa waxaa abaaraha u sii dheer dag aalka soddonka sano ka socda, fatahaado iyo ko ran-korada ayaxa ee mararka qaarkood cagta mar inaya dalagyada beeraha.
Magacyada Afarta Xildhibaan ee Shalay la doortay
Xildhibaano ka mid ah Gola ha Shacabka ayaa Shalay lagu doortay Magaalooyin ka Dhuusa mareeb iyo Baydhabo.
Hal xildhibaan ayaa lagu door tay Dhuusamareeb halka Sad dex xildhibaan lagu doortay mag aalada Baydhabo Guddo omiye Maxamed Mursal Sheekh Cabdira xmaan ayaa ku guuleystay kursiga tirsigiisu yahay Hop182 ee golaha shacabka BJFS isagoo kaga guu leystay tartanka Faysal Ibraahim Xasan.
Fowsiya Maxamed Shekh ayaa mar kale ku guu leystey Kursiga Nambarkiisa uu yahay Hop 171 ee Golaha Shacabka Baarlamaanka Soomaaliya wax ayna Heshay Codad dhan 84 halka musharaxii la tartamaysay ee Khadiijo Maxamed Ibraahim oo iy adana heshay Codad dhan 13.
Aadan Maxamed Nuur (Saran-soor) ayaa ku guu leystey Kursiga Nambarkiisa uu yahay Hop 170 ee Golaha Shacabka Baarlamaanka Soomaaliya wux uuna heley Codad dhan 82 halka musharaxii la tar tamayey ee Zakariye M.Cabdi uu isna heley 12.
Cabdi shakuur Cali Mire ayaa ku guuleystay kur siga tirsigiisu yahay Hop#054 ee golaha shacabka BJFS isagoo kaga guuleystay tartanka musharixiin dhowr ah.
Weerar Lagu Dilay Askar Ka Tirsan Ciidan ka AMISOM Oo Ka Dhacay Shabeellaha Hoose
Al-shabaab ayaa sheegtay in weerar loo adee gsaday Madaafiic ay ku dileen Askar ka tirsan Cii danka Midowga Afrika ee AMISOM gaar ahaan ku wo kasoo jeeda Uganda oo ku sugnaa Saldhig Ci idan ku yaalla degaan hoostega degmada Afgooye ee Gobolka Shabeellaha Hoose.
Weerarka ayaa ka dhacay Saldhig Ciidanka AMISOM ay ku leeyihiin degaanka La antabuuro ee duleedka de gmada Afgooye, waxa ana la sheegay in gudaha Saldhiga ay ku dhaceen qaar kamid ah madaafiicda ay Al-shabaab ku weer areen halkaas.
Al-shabaab warar ay ku qoreen barahooda Internet-ka ayaa waxaa ay ku sheegteen in weerarkii ay ku qaadeen Saldhiga Ciidanka AMISOM ee degaanka Laantabuuro ku dhinteen afar Askari, halka afar kalena ay dhaawacyo soo gaareen, kuwaasi oo xer ada loo qaaday diyaarad.
Waxaa ay intaas kusii dareen in Madaafiicda qa arkood ay ku dhaceen Teendhooyin, isla markaana burburiyey qeybta Isgaarsiinta iyo Caafimaadka sa ldhigga Laanbuuro ee duleedka degmada Afgooye ee Gobolka Shabeellaha Hoose.
Weli ma jiro wax war ah Taliska Ciidanka Midow ga Afrika ee AMIOSM oo ay uga hadlayaan weer arka khasaaraha dhaliyey ee Al-shabaab ku qaad een Saldhiga Ciidanka ku leeyihiin degaanka Laan tabuuro, mana ahan markii ugu horreeysay oo la weeraro halkaas.
Wasiir Alcadaala oo ka hadlay diidmada iyo hanjabaadda mucaaradka
Wasiir Kuxigeenka Wasaaradda Warfaafinta So maliya, Cabdiraxmaan Yuusuf Cumar (Alcadaala) ayaa ka hadlay, sida adag ay mucaardka uga yim aadeen qaabka ay ku socoto doorashada dalka.
Wasiir Kuxigeenka Warfaafinta ayaa diidmada mu caaradka ku tilmaamay mid waqtigeedii laga soo gudbay, inkastoo sida uu sheegay ay furan tahay in cabasho laga keeni karo hannaanka doorashada.
Waxaa uu sheegay in doorashadu tahay mid lagu heshiiyay, haddana ay shaqadeeda socoto, isla-markaana aysan diidanayn in cabashooyin laga qabi karo.
"Doorashada cabasho waa laga qabi karaa, ma cnaheedu maaha hadalkayna inaysan cabashooyin ku jirin.” Ayuu yiri Wasiir Kuxigeenka Wasaaradda Warfaafinta.
Waxa kaloo uu yiri "Waxa lagu heshiiyay ee door ashada ay ku socoto inay xun yihiin iyo inay fiican yihiin dood Shalay furan ma’aha. Waa wax lagu sha qeeyay oo shaqadooda ay socoto oo lagu dhex jiro.”
Alcadaala ayaa yiri "Doodaas waxay ka baxsan tahay qofka qaba wixii lagu heshiiyay oo dhan inu usan ku qanacsanayn oo waxa bannaankoodu uu ka hadlayo. Waxa ay ila tahay doodiisu inay soo da ahday oo waqtigii ku haboonaa uu ka soo gudbay, haddana waa u furan tahay oo geeska kale ayay u ga furan tahay.” Alcadaala oo ka qayb qaadanayay Barnaamijka Doodda Jimcaha ee (Waxa ay ila tahay) ayaa xusay inaanan la aqbali karin in doora shada la boobo, Ra’iisal Wasaaruhuna uu dhawaan arrintaasi caddeeyay, balse aan loo baahnayn waxa u eg hanjabaadda ee ka soo yeeraysa mucaaradka.
"Waa sax lama aqbali karo in doorashada la boobo. Ra’iisal Wasaaruhu laba habeen ka hor ayuu ka ha dlay in doorasho la boobo iyo in dadka lagu tacad iyo, midna lama ogolaan karo. Waa in nidaamka loo maraa oo lagu dhex dacwoodaa, laakiin arrinta ku saabsan waxa hanjabadda u eg ee ah natiijada ka dhalan doonto doorashooyinkan iyo sida ay noqon doonto waxaa la rabaa inaysan buuq ahaanin. Aqbalaadda natiijadu waxay ku xiran tahay wixii lagu heshiiyay in lagu shaqeeyo, wixii lagu heshi iyay inaan lagu shaqeynina waxay u baahan tahay in dood sax ah la geliyo oo la caddeeyo.” Ayuu yiri Alcadaala.
Afhayeenka Midowga Musharaxiinka, Daahir Maxamuud Geelle ayaa Khamiistii sheegay in door ashada laga leexiyay jidkeedii, waxaana ka dhalan kara buu yiri burbur baahsan.
Warbixin uu Machadka Heritage ka soo saaray doorashada dalka ayaa lagu sheegay in qaabka ay ku socoto doorashada ay tahay wax cadaaladda ka fog. Guddiga Hirgelinta Doorashooyinka Heer Feder aal iyo Guddiyada Doorashooyinka ee Maamul Goboleedyada qaarkood ayaa lagu eedeeyay inay hal dhinac u gurbinayaan.
Golaha Midowga Musharaxiinta ayaa sheegay aysan aqbali doonin doorashoouinka deegaanada qaar ee lagu bolaabay boob qaawan oo la isu awo od sheegtay, laguna tuntay habraacyadii doora shada, taasoo halis gelineysa xasiloonida dalka iyo jiritaanka dowladnimada.Golaha Midowga Mus haraxiinta ayaa sidoo kale in ay tahay wax laga xumaado in aan xaq aheyn loo waddo doorashada oo la sameyna ayo boob aan loo meeldayin.
Midowga Musharaxiinta ayaa maalmahan leh shi rar dhexdooda, sidoo kale ay kulan la yeelanayaan Ra’iisul Wasaare Rooble iyo qeybaha kala duwan ee Bulshada iyo Beesha Caalamka.
Yaasiin Farey: Weli qoriga waan wataa oo ma aan dhigin
Taliyaha KMG ah ee hey’adda NISA Yaasiin Ca bdullaahi Farey oo maalin ka hor la gu doortay mag aalada Dhuusamareeb ayaa ka hadlay wax qabad ka u qor sheysan, maadaama uu ku guuleystay inuu noqdo xubin ka tirsan golaha shac abka.
Yaasiin Farey ayaa sheegay in ha dii uu xildhiba an noqday uusan weli qorigii dhigin, isla markaana uu xoogga saari doono sidii Al-Shabaab looga xor eyn lahaa deegaanada ay degto cidda uu ku metelo golaha shacabka ee bariga gobolka Galgaduud.
"Cadawgu waxuu u baahan yahay in la soo sa aro sharciyad lagu dagaalamo, kaas ayaan rabaa in aan dhankiisa dagaalka u weeciyo, welina qorigii waan wataa oo ma aanan dhigin,” ayuu yiri Yaasiin Cabdullaahi Farey.
Sidoo kale Taliye Yaasiin Farey ayaa u mahad celiyey ergadii dooratay, isagoo sheegay waxyaaba ha laga faafiyo aysan waxaba ka jirin, inkastoo uus an sii faahfaahin waxyaabahaas.
Hadalkaan ayuu ka jeediyey kulan ka dhacay Dhuusamareeb oo lagu soo dhaqeynayey doora shadiisa, kaas oo ay ka qeyb galeen mas’uuliyiin ka tirsan Galmudug iyo dowlada federaalka.
Yaasiin Farey ayaa ka mid ah saraakiisha hey’ adda NISA ee uu dul hoganayo tuhunka khaarajintii Ikraan Tahliil oo aheyd sarkaal ka tirsanaa NISA oo
la waayey meel ay jaan iyo cirib dhigtay.
Beesha WACEYSLE oo ka baxeysa GAL MUDUG
Nabadoon Cali Xasan Cali Jeesto oo ah Nab adoonka iska leh saxiixa kuriga golaha shacabka ee beesha Waceysle oo lagu soo saaray Yaasiin Farey ayaa ku hanjabay in be eshu ay is aga bixi doonto awood qeybsiga maamul ka Galmudug, hadii aan bo ob ka laga deyn xaqeeda.
Nabadoonka oo hadal ka jeediy ey kulan ay is u gu yimaadeen waxgarad ka beesha Waceysle ay aa ugu laab qaboojiy ey be esha in saxiixii ay u dhii bteen uu u hayo, isla mar kaana aysan socon doo nin wax aysan raali ka aheyn.
Sidoo kale Nabadoon Jeesto ayaa madaxweyna ha Galmudug Qoor Qoor ku eedeeyey inuu in kiray oo xaqiray, iskuna deyey inuu xaqiro xaqa beesha Waceysle.
"Madaxweyne Qoor Qoor waxaan u sheegaa ku rsigaas waxaa iska leh beel weyn, beeshaas weyn hadaa xaqeeda boobto oo hal wiil ka doorato oo aad ka tashato, ayaguna waa kaa tashadeen, waxa ana moodeynay in Galmudug aan wada leenahay ay meesha ka jirtee, koraad u heysanee waxaad keligaa isku koobtay,” ayuu yiri Nabadoon Jeesto.
Nabadoonka ayaa dowladda federaalka u she egay in kursiga loo boobay Yaasiin Farey uusan ah eyn mid la boobi karo, "Waad ku qaldanteen, dad adag ayaa iska leh kursigaan, hadii sharci shaqeyn waayo sharci darro cid nooga adag ma jirto, waxa an nahaydadka laga baqo inay waxboobaan ee anaga nalama boobi karo,” ayuu yiri Nabadoon Je esto.
Nabadoonka ayaa sheegay in waxa dalka ka socda aysan doorasho aheyn, "Si qaas ah waxaan ula hadlayaa Waceysle, waad u jeediin sida Galmudug noola dhaqmeyso, maamulkaan ku bi iri laheyn aan ka tashano, Ga lmudug, wiil ayey naga doorataye ha heysato, anag ana dhulkeena ayaan xoreysaneynaa waana dege ynaa,” ayuu yiri.
Ugu dambeyntii Nabadoonka oo fariin u diray Ya asiin Farey ayaa u sheegay inuu istaahilo inuu me telo beesha Waceysle, laakiin aysan ka yeeli doonin inuu boobo. Xigasho:-Caasimadda.net
Beeshii 2aad oo shaacisay inay ka baxay so Galmudug ka dib ‘Boobkii Shalay’
Waxgaradka Mareexaan oo ka soo hor jeeda bo ob ay sheegeen in lagu sameeyey kursigoodii go laha shacabka ee HOP#054 ayaa shir jaraa’id ku qabtay magaalada Dhuusamareeb, waxayna sheeg een in la boobay kursigooda, iyagoo ku goodiyey in aysan aq bali doonin, wixii Shalay ka dha cay Dhuusamareeb.
Kursigaas oo afartii sano ee la soo dhaafay uu ku dhafiyey Xildhibaan Cabdish akuur Cali Mire ayaa Shalay doorashadiisa lagu qa btay Dhuusamareeb, waxaana la shaaciyey in mar kale uu ku soo baxay Cabdishakuur Cali Mire oo ah nin siyaasad ahaan aad ugu dhaw madaxweyne Farm aajo.
Waxgaradkii Shalay saxaafadda kula hadlay Dhu usamareeb waxay sheegeen in Cabdishakuur ay doorteen dad aan ka dhalan beesha iyo askar, sida ay hadalka u dhigeen, waxayna cadeeyeen in aay aha kursigaas ay u tasha doonaan.
"Musharaxiinta Mareexaan ee u tartameysa sed dax kursi ee soo hartay, qofkii aan dooneyn inuu wax boobo ha aado Caabudwaaq iyo Balambal, hal kaas ayaan aayaheena uga tahsaneynaa, Galm udugtii aan garbaha ka taagneyn ayaa na boobe ysa, cid sanka naga toli karta ma jirto,” ayuu yiri mid ka mid ah waxgaradka Mareexaan.
Waxa uu shaaca ka qaaday in shir weyn ay bee sha Mareexaan ku qabsan doonto magaalada Caab udwaaq maalmaha soo socda, "Galmudug sidaan ugama sii mid ahaan karno, musharaxiinta beeshee na ha tageen Caabudwaaq, halkaas ayaan ku door aneynaa kuraasteena.” ayuu yiri. Waa beeshii laba ad oo ku goodineysa inay isaga baxeyso maamul goboleedka Galmudug, kadib markii la boobay kura astooda, Mareexaan iyo Wac aysle, waxay sheege en in kuraastoodii loo boobay Yaasiin Farey iyo Cab dishakuur Cali Mare oo ah laba nin oo Farmaajo aad ugu kalsoon yahay, iya goo ka dhiidhinaya boo bkaas ayey hoggaanka bee lahaas shaaciyeen inay isaga bixi doonaan Galm udug oo aayahooda ay ka tashan doonaan.
Ethiopia oo dalab u dirtay dowladda Marey kanka, xilli XAALKA uu ku xun yahay
Dowladda Itoobiya ayaa ka codsatay Mareykan ka in uu joojiyo faafinta waxa ay ugu yeertay wararka been abuurka ah ee ka dhanka ah Itoobiya, sida uu sheegay wasiiru dowlaha isga arsiinta dalkaasi Khamiistii Dorraad.
Itoobiya ayaa warkan soo saartay kadib markii wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka ay soo saartay digniin ku saabsan "weer arro argagixiso”.
Sida ay shaacisay warbaahinta dowl adda ee EBC, wasiiru dowlaha isga arsiinta, Kebede Dess isa, ayaa sheeg ay in dowladda Mareykanka ay ta hay inay ka fogaato baahinta "warar been abuur ah oo ceeb iyo sumcad dil ah, oo ku saabsan Itoobiya,”
Waxa uu soo hadal qaaday bayaan ka soo ba xay safaarada Maraykanka Talaadadii kaas oo ku booriyay muwaadiniinteeda in ay la yimaadaan feej ignaan dheeraad ah, sababtuna ay tahay "suurtoga lnimada weerarro argagixiso oo ka dhaca Itoobiya”.
Xukuumadda Ra’iisal Wasaare Abiy Ahmed iyo xoogagga fallaagada ah ee ka soo jeeda gobolka Tigray ee waqooyiga dalkaasi ayaa in ka badan hal sano dagaallamaya, waxaana dagaalkaas uu gala ftay kumanaan qof, halka malaayiin kalena ku bar akiciyeen dalka labaad ee ugu dadka badan qaar adda Afrika.
Toddobaadkan ayay dowladda Ireland sheegtay in Itoobiya ay erisay afar ka mid ah lix dublamaasi oo Irish ah, sababtoo ah mawqifka Ireland ee daga alka Itoobiya.
Afhayeen u hadlay dowladda Itoobiya ayaa si doo kale ka digay hanjabaado dibadda ah oo aan la magacaabin, waxayna dowladaha reer galbeedka ku dhaleeceeyeen ‘wararka aan sax ahayn ee ku saabsan dagaalka.’ Reuters + VOA
Madaxweynaha Dowlada Deegaanka Soomaa lida Mustafe Muxumed Cumar (Cagjar) iyo wafti uu hogaaminayo, oo safar dhinaca dhulka ah Somali land kusoo gaadhay, ayaa sheegay in uu u socda sidii Somaliland iyo deegaankiisu iskaga kaashan la haayeen ka gudbista dhibaatooyinka ka jira Geeska Afrika ka jira.
"Waxaanu u soconaa in aanu masuuliyiinta iyo madaxda Somaliland kala hadalo arrimo la xidhii dha iskaashiga guud, sida dhaqaalaha, isdhexgalka bulshada, tan iyo markii uu isbadalku deegaanka ka dhacay, iyadoo dadku ay horayba walaalo u ahaa yeen hadana is badal balaadhan ayaa ka jira dhin aca is dhexgalka" ayuu yidhi Cagjar.
"Somaliland oo ah dad aanu walaalo nahay, dow lad aanu jecelnahay, in xaaladaha geeska ee soo kordhay aanay samayn xun nagu yeelan, dhinaca amnigana sidii loosii adkayn lahaa ayaanu u soco naa".
Madaxweyne Cagjar ayaa sheegay in uu saxaafada la wadaagi doono waxa ay isla meel dhigaan madaxda Somaliland kadib markay kulamo qaataan.Madaxweynaha iyo waftigiisa ayaa waxaa magaalo xuduudeeda Tog-wajaale kusoo dhaweeyay wasiirka arrimaha gudaha Somaliland Maxamed Kaahin Axmed iyo saraakiil kale oo xuk uumada Somaliland ka tirsan
Baarlamaanka Midowga Yurub ayaa ku tilmaam ay sharciga Soomaaliya ee saxaafad da mid xad idaya madax bannaanida warbaahinta, isla marka ana horseedaya in la dhibaateeyo saxafiyiinta Soo maaliyeed.
Qaraar ay si wadajir ah u soo saareen oo diira dda lagu saarayey Xuquuqda Aadanaha, Xorriy adda Saxaafadda iyo Xaalladda Bani’aadannimo ee Soomaaliya, ayaa Baarlamaanku waxa ay ku taage ereen go’aanka ay Midowga Yurub si rasmi ah uga codsan doonaan Soomaaliya in ay baabi’iso Sharc igeeda Saxaafadda.
"Baarlamaanka Yurub wuxuu ugu baaqayaa mas 'uuliyiinta Soomaaliya inay baabi'iyaan qodobbada sharciga saxaafadda ee 2020 wax laga beddelay kaasoo si weyn u xaddidaya xorriyadda saxaafadda iyo xorriyadda hadalka, oo aan u hoggaansamaynin heerarka caalamiga ah ee xorriyadda hadalka," ay aa lagu yiri bayaan kasoo baxay midowga Yurub.
Midowga Yurub ayaa sheegay saxaafaddu inay door weyn ku leedahay xaqiijinta doorasho xor iyo xalaal ah, balse waxay sheegtay Soomaaliya oo xill igan doorasho ku jirta in saxafiyiinta iyo dadka u dhaqdhaqaaqa xuquuqul insaanka loo hanjabo, la xiro ama loo diido nidaamka sharciga ah ee max kamadaha.
Nooc cusub oo cudurka Karoonaha oo lagu arkay qaar ka mid ah dalalka Caalamka iyo xayiraado looga dhawaawaqay
Ururka Caafimaadka Adduunka (WHO) ayaa ku dhawaaqay nooc cusub oo coronavirus ah, kaasoo halis ku ah dunida kana sii qartarsan noocyada Kar oonaha ee horay loo soo arkay, waxaana hay’adda ay u bixisay noocaan Omicron.
Hay’adda WHO ayaa sheegtay in markii ugu hor reysay laga soo sheegay Koonfur Afrika 24kii Nofem bar, waxaana sidoo kale la gu aqoonsaday Botswana, Belgium, Hong Kong iyo Israel.
Wadamo dhowr ah ayaa hadda go’aansaday in ay mamnuucaan ama xaddidaan socdaalka iyo dadka imaanaya koonfurta Afrika.
Qaar ka mid ah dalalka caalamka ayaa sheegay in noocaan cusub ee Karoonaha oo ah midkii Afra ad in ay ka hor tagi doonaan in dalalkooda uu soo gaaro.
Saraakiisha Mareykanka ayaa sheegay in la xa nnibi doono duullimaadyada ka imaanaya Koonfur Afrika, Botswana, Zimbabwe, Namibia, Lesotho, Es watini, Mozambique iyo Malawi, wixii ka dambeeya maalinta isniinta ah ee soo socota.
Wadamada, Hindiya, Iran, Japan ,Midowga Yu rub iyo Switzerland ayaa sidoo kale si ku meel gaar ah u joojiyay duulimaadyadii tagi jiray iyo kuwii ka imaan jiray qaar ka mid ah wadamada koonfurta Afrika.